Banyere Anyị - Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd.
Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd. bụ ọkachamara graphite electrode emeputa na ekspootu kemgbe 2012.It emi odude ke Handan City, Hebei n'ógbè ebe a maara dị ka "China Northern Carbon Industry Base" .The okporo ụzọ bụ adaba na ọ bụ nnọọ nso ka Ọdụ ụgbọ mmiri Tianjin.
Anyị na-pụrụ iche na nhazi na n'ichepụta graphite electrodes na carbon electrodes.Our ngwaahịa na-ere ọma na China na exported ka Southeast Asia, Middle East, Russia na America.
Anyị isi na ngwaahịa ndị Graphite electrodes na Carbon electrodes, nke nwere ike kere n'ime Regular ike graphit electrode (RP), Akwa ike graphite electrode (HP), High impregnated graphite electrode (IP), Ultra-elu ike graphite electrode (UHP), impregnated ngere graphite, grafite ngọngọ, Calcined Petroleum Coke na High density carbon electrodes.
A na-etinyekarị electrode maka ụlọ ọrụ metallurgy na calcium carbide, ụlọ ọrụ phosphor-chemical, dị ka ígwè na nchara ọla na ọkụ ọkụ ọkụ, sịlịkọn na-emepụta ihe na-acha odo odo, phosphorous na-acha odo odo, ferroalloy, titania slag, aja aja na-agbaze alumina na-agbanye ọkụ nwere mmepụta zuru oke, nke gụnyere ngwakọta agwakọta, ịkọ ihe, ịkụpịa, nyocha, ibu arọ, ikpuchi, ịme akara, akara mmiri, akụrụngwa impregnation, akara ngosi na ịkpụzi na ịkpụzi akara.
Anyị nwere ahụmahụ injinia na iwu siri ike àgwà akara usoro iji hụ na àgwà nke anyị products.Also anyị nwere ike na-enye anyị ọkachamara mbukota na njem ngwọta.
Enyerela ụlọ ọrụ anyị ọtụtụ utu aha nsọpụrụ dị ka "azụmaahịa azụmaahịa nke mmepeanya", "debe nkwekọrịta nkwekọrịta dị oke mkpa", "ndị na-azụ ahịa ntụkwasị obi" wdg. Anyị ga-achọ ịnye ndị ahịa ngwaahịa na ọrụ mbụ. n'ụwa nile ma bụrụ onye ị ga - atụkwasị obi nke ngwaahịa ngwaahịa carbon na China.
Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd na-erubere mmụọ mmụọ nke ụlọ ọrụ nke "Development, ọhụrụ, ịchụso ịdị mma na mmeri mmeri". Anyị nwere ike technology otu, elu mmepụta akụrụngwa na elu oru oma management otu.
Ahịa'demand bụ ihe mgbaru ọsọ anyị. Ndị ahịa'su ịga nke ọma bụ ihe ịga nke ọma anyị.
Anyị ji obi anyị dum kwe nkwa, sị:
- stmepụta profaịlụ ndị ahịa zuru oke, ịghọta onye ahịa kwesịrị inye ngwaahịa na ọrụ ezubere iche.
--Sju afọ na ijere ndị ahịa ozi ike na-arịwanye elu na-achọ, na-eke asọmpi ogologo oge na ohere ndị ahịa maka ndị ahịa.
-Establishing pụrụ iche ọrụ òtù maka cheking, mbupu, ngwaahịa nchekwa etc nke nwere ike inye ngwa ngwa na ahịa 'arịrịọ.
-Kpọtụrụ ndị ahịa ahụ mgbe niile, nyochaa nsuso ndị ahịa nke ngwaahịa ndị a na-eweta, na-enye ọrụ ndụmọdụ maka ngwaahịa ndị a na-eweta.
Ijere ibe ga-enye nzaghachi ndị ahịa 'nzaghachi n'ime 24 awa.
-We ga-amasị iji nweta mmeri-mmeri imekọ ihe ọnụ na ndị ahịa.
Daalụ maka uche gị na nkwado gị Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd. Ugbu a, ngwaahịa anyị agbasala ọ bụghị naanị mba anyị niile, kamakwa na Europe, America, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na mpaghara ndị ọzọ, Hebei Yidong Carbon Products Co., Ndị na-ebubata ngwa ahịa dị na China bụ ụlọ ọrụ kachasị mma na China, ụlọ ọrụ anyị ga-eji sayensị na teknụzụ ghọta usoro akụ na ụba ụwa.
Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd na mgbe rube isi na enterprise mmụọ nke "Development, ọhụrụ, ịchụso mma na mmeri-mmeri imekọ ihe ọnụ" .Anyị nwere ike technology otu, elu mmepụta akụrụngwa, elu oru oma management otu na mbụ na klas mgbe ire ere iji kwado nkwa nke ngwaahịa anyị.
Họrọ Yidong bụ ịhọrọ ntụkwasị obi. Anyị ga-anọgide na-enye ngwaahịa dị elu, ezigbo teknụzụ teknụzụ na ọrụ zuru oke mgbe erechara ndị ahịa anyị.